Shiinaha muraayadaha badbaadada badbaadada caafimaadka soo saarayaasha iyo alaableyda | ORIENT
Maaddada darajada caafimaadka ayaa ka dhigaysa muraayadda mid aad u ammaan badan; Muraayadaha badbaadada oo leh daloolka hawada. Ka-hortagga-ceeryaanta Ka-hortagga boodhka, Ka-hortagga fayraska. Muuqaalka iyo qaabdhismeedka: Daboolka difaaca ayaa leh dusha sare, bur bur la'aan, hufnaan, raaxo leh in la xidho, dusha sare ee muraayadda siman, xoqin lahayn, goobooyin ma leh, nijaasta ma leh, laastikada oo leh dabacsanaan wanaagsan.
Magaca Badeecada suunka suunka sheild sheild
Waxyaabaha PVC, chloride polyvinyl fasalka Caafimaadka
Qalabka Lens Ceeryaamo Anti & UV400 polycarbonate cusbi
Maaddada Elastikada 100% cudbi
Isticmaalka Ilaalinta indhaha (la tuuro)
Heerka Tayada Heerka Mareykanka: ANSI / ISEA Z87.1-2020Heerka Yurub: EN166: 2001
1. Waxyaabaha ku jira darajada caafimaadka ayaa muraayadaha indhaha ka dhigaysa mid ammaan ah;
2. Muraayada badbaadada oo leh dalool hawo
3. Anti-fog Anti-boodhka, Anti-virus
4. Muuqaalka iyo qaabdhismeedka: Daboolka difaaca ayaa leh dusha siman, ma leh nabarro, daahfuran, raaxo leh in la xidho, dusha sare ee muraayadda siman, xoqin lahayn, goobooyin ma leh, nijaasta ma leh, laastikada oo leh barti wanaagsan
5. Diidmada kahortaga: indha shareerka wuxuu si xor ah uga dhacaa dherer dhan 1m, qeybaha qaab dhismeedku ma dhacaan, muuqaalka indha shareerka ma jabo, muraayadaha indhahana ma dilaacaan
6. Iska caabbinta kuleylka: maaskaro indhaha ayaa la hayaa 67±2℃biyo ku jira 3min bilaa cillad la'aan
7. Xarig jilicsan oo la hagaajin karo
Mabda ' ee Ilaalinta indhaha goggle:
Muraayadaha amniga waa nooc gaar ah oo muraayad ah oo loogu talagalay in looga hortago shucaaca, kiimikada, farsamooyinka iyo dhererka kala duwan ee hirarka iftiinka.
Waxaa jira noocyo badan oo muraayadaha difaaca ah, muraayadaha siigada ee gaarka ah, muraayadaha naxdinta leh, muraayadaha kiimikada iyo muraayadaha kahortagga shucaaca.
a. Haddii aad leedahay kayd, dhalinta muraayadaha indhaha waxay noqon doontaa 1-2 maalmood;
b. Haddii ay soo saaraan wax cusub, gaarsiintu waxay noqon doontaa 30-45 maalmood.
Su'aalaha la iska waydiiyo ee muraayadaha indhaha:
Q1: Miyaa la iga qaadi karaa tijaabada baaritaanka?
J: Haa, waad awoodaa, laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixiso.
Q2: Miyaad aqbashaa amarrada yaryar?
J: Haa. Haddii aad tafaariiqle yar tahay ama aad bilaabeysid ganacsi, waxaan xaqiiqdii diyaar u nahay inaan kula korno. Waxaana rajeyneynaa inaan kulashaqeyno xiriir dheer.
Q3: Ma leedahay habraacyo kormeer ah oo loogu talagalay alaabooyinka?
A: 100% is-kormeer kahor intaadan xirxirin.
Q4: Ma booqan karaa warshaddaada ka hor amarka?
J: Hubaal, booqashadaada waa la soo dhaweynayaa waqti kasta.
Q5: Sidee ku saabsan qiimaha? Ma ka dhigi kartaa mid ka jaban?
J: Had iyo jeer waxaan u qaadanaa macaamilka macaashkiisa mudnaanta koowaad. Qiimaha waa laga gorgortami karaa shuruudo kala duwan, waxaan kuu xaqiijineynaa inaad hesho qiimaha ugu tartamaya.
Hore: Gawaarida Caafimaadka nitrile / PVC
Xiga: Koofiyad kooxeed oo la tuuri karo